Tuchel oo markii ugu horreysay ka hadlay aragtida uu ka qabo horyaalka cusub ee European Super League – Gool FM
(London) 19 Abriil 2021. Tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa muujiyay kalsooni uu ku qabo in kooxda ay sameyn doonto go’aamada saxda ah ee horay loogu soconayo, kaddib markii ay ogolaadeen inay kamid noqdaan aas aasayaashii horyaalka cusub ee European Super League.
Thomas Tuchel oo ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka habeen dambe ay Brighton kula ciyaari doonaan Premier League, ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan arrintan ogaaday shalay oo kaliya, waxaan halkaan u imid inaan u dagaalamo tartamada ugu adag waana taas sababta aan u ogolaaday inaan tababaro Chelsea.”
“Sidaad ogtahay, waxaan doorbidayaa inaan ku mashquulin dhamaan khilaafkan taagan ee hareeraheena ah. waxaan ku kalsoonahay kooxdeyda inay qaadaneyso go’aanka saxda ah. way cadahay inaanan kala qeyb galin ciyaartoyda kooxda go’aan qaadashada, shaqadeyda waa inaan hoggaamiyo kooxda farsamo ahaan oo aan diirada saarno kulankeena soo socda halkaasoo kulan muhiim ah uu nagu sugayo berry.
Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa wali u tartameysa FA Cup iyo Champions League, halka ay si ku meel gaar ah u fariisan doonaan booska saddexaad ee jadwalka horyaalka Premier League haddii ay garaacaan Brighton habeen dambe.